सभामुख चयन: शक्तिशाली केपी शर्मा ओलीले हार्ने मोर्चा किन सम्हाले? - BBC News नेपाली
सभामुख चयन: शक्तिशाली केपी शर्मा ओलीले हार्ने मोर्चा किन सम्हाले?
पार्टीका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले विभिन्न कालखण्डमा पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी पाइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका थिए। तर लामो समय केपी शर्मा ओलीलाई ती दुवै अवसर जुरेन। उनी पार्टीभित्र सधैँ प्रतिपक्षी जस्तो भूमिकामै सीमित रहे।
मूलत: तराई केन्द्रित दलले 'राजनीतिक दुश्मन'को कोटीमा राखे पनि पार्टीभित्र र बाहिरको एउटा तप्कामा ओलीको छवि 'राष्ट्रवादी' नेताकै बनेको देखियो।
संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डलाई एकता मोर्चामै बाँधेर अन्तत: दुई तिहाइ नजिकका शक्तिशाली नेताको रूपमा सत्तामा फेरि उक्लिए।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमार्फत किनारामा पुर्‍याउन साथ दिएका उनै प्रचण्डसामु 'शक्तिशाली' ओली सभामुख चयन प्रकरणमा देखिने गरी गल्नु परेको छ।
उनै प्रचण्डले सभामुख चयनमा 'टसमस' नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्नु परेको ओलीको सचिवालयका एक नेताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताए।
उनका अनुसार 'एकताको क्रम मूलत: सकिएकाले अब दुई पार्टी भन्ने चक्र तोडौँ' भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै अनुसार उनी सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहन्थे। सुरुमा प्रचण्ड पनि सहमत थिए।
पूर्वमाओवादीका अन्य नेताहरू भने सभामुख स्वाभाविक र सहज रूपमै पूर्वपार्टीबाटै बन्नेमा विश्वस्त थिए।
तर जब त्यसलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेका खबरहरू सार्वजनिक हुन थाले एकथरी नेताहरूको मनमा शङ्का लाग्न थाल्यो, 'कार्यकारी अधिकारको उल्लासमा प्रचण्डले सभामुख छाड्ने त होइनन्'।
बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताकै क्रममा प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले 'प्रचण्डले सभामुख छाड्दैमा नमान्ने' चेतावनी दिए।
पूर्व माओवादीले सभामुख नछाड्ने, ‘प्रचण्डले छाड्दैमा हुन्छ?’
तर पूर्वएमालेका नेता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका बेला प्रचण्डलाई उनी निकट नेताले सभामुख पनि दिने भए 'काशी जान' चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको एकथरीको भनाइ छ।
उनी नै अडानबाट पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति 'अनपेक्षित निर्णय' गर्नुपर्‍यो र फेरि भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो।
'ओलीको दोस्रो हार'
उनी र उनी निकट नेताहरूले त्यसलाई नयाँ निर्णय नभएको देखाउन खोजे पनि पार्टीभित्रको अभ्यासमा प्रचण्डले उक्त निर्णयपछि नै 'शक्ति अभ्यास' गर्न थालेको देखिन्छ।
उनीहरू सभामुख प्रकरणमा पूर्वएमाले नेताहरूको व्यवहार 'सौताको रिसले पतिको काख फोहर गरेको' जस्तो भएको सुनाउँछन्।
तर नेकपाकै एक सचिवालय सदस्यले 'निर्णय प्रक्रिया फरक हुन सक्थ्यो' भन्दै बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारीको सङ्केत दिए।
अर्का नेता त्यो अवस्थामा ओली चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै 'विग्रहको चरणमा प्रवेश गर्ने त्यो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो' भन्ने विश्वासमा देखिए।
तर दुवै अध्यक्षसँगको समन्वय र सम्पर्कमा रहने नेता जनार्दन शर्माले भने, "होइन, बरु दुई दल भन्ने भावना झनै मेटियो।"
"अग्नि सापकोटाको नाम प्रधानमन्त्रीले पो प्रस्ताव गर्नु भएको हो। सर्वसम्मत त्यो निर्णयले एकता थप सुदृढ भएको सन्देश प्रवाह भएको छ।"
यद्यपी 'बोलेपछि गरी छाड्ने' नेताको छवि विपरीत ओलीले सभामुख चयनमा जसरी दाउ हाने र पछि हटे सम्भवत: छ वर्षअघिको माघ महिनामा संसदीय दलको नेता हुँदै सुरु भएको वेगवान् राजनीतिक आरोहणपछि ओलीको निम्ति यो पहिलो अनपेक्षित अवरोहण हो, जुन संयोगवश माघ महिनामै हुन पुग्यो।